यी सपना जसले तपाईंलाई धन प्राप्तीको सकेत दिन्छ !!! – live 60media
यी सपना जसले तपाईंलाई धन प्राप्तीको सकेत दिन्छ !!!
त्यसैले उनीहरुलाई सपनामा देखेका कुराहरुले जीवनमा पारेको असरबारे थाहा हुँदैन।तिष शास्त्रका अनुसार हरेक सपनको केही अर्थ रहने गर्छ र यसले कुनैपनि व्यक्तिको भविष्यको संकेत गर्ने गर्छ। १ ,सपनामा औंठी लगाएको देख्नु भो भने धन प्राप्त हुन्छ ।२. सपनामा घर बनाएको देख्दा पनि धन हात लाग्छ ।
३. कमलको फूल देखेमा पनि धन प्राप्तीको संकेत मानिन्छ ।४. तरभुजा देख्नु भो भने बुझ्नुस् धनलाभ हुँदैछ ।५. सपनामा लाश देख्नु पनि शुभ मानिन्छ । सपनामा लाश देख्दा पैसा प्राप्त हुने विश्वास गरिन्छ ।६. सपनामा गरिवी विपन्नता देखिनु शुभ हो । यसले विपनामा समृद्धी दिलाउँछ ।
७. सपनामा सुगाको तोता देख्नु निक्कै शुभ मानिन्छ । यसले धनप्राप्तिको संकेत गर्छ ।८. सपनामा गाइ वा भैसीको थुन छोएको देखे निक्कै राम्रो मानिन्छ ।९. सपनामा तराजु देखियो भने विपनामा धन मिल्छ ।१०. तास खेलेको सपना देख्दा ब्यापार वृद्धी हुने र धन बढ्ने संकेत मिल्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस् :एउटी महिलाको जिद्दीको अगाडि हार्‍यो चीनको सरकार !:चीनको गुआंगडोंग प्रान्तकी एक महिलाको जिद्दीको अगाडि चीनको सरकार हारेपछि अहिले त्यहाँ निकै अनौठो दृश्य देख्न पाइन्छ । प्रान्तमा एउटा फास्ट लेन राजमार्ग छ जसको बीचमा एउटा घर छ जुन घर देख्दा मानिसहरु चकित पर्छन् । यो घरकी मालिक एक महिला हुन् जसले राजमार्गमा तीब्र गतिमा गुडिरहेका गाडीहरुको ठिक बीचमा रहेर आफ्नो जीवन बिताइरहेकी छिन् ।
द सनको रिपोर्टअनुसार ती महिलाको घर यहाँ राजमार्गको निर्माण हुनुभन्दा पहिलेदेखि नै थियो । सरकारले राजमार्ग निर्माण गर्ने क्रममा उनको घर हटाउन चाह्यो तर महिलाले मानिन् । सरकारले ती महिलालाई त्यहाँबाट हटाउन निरन्तर १० वर्षसम्म प्रयास गर्यो तर ती महिला आफ्नो अडानबाट पटक्कै पछि हटिनन् । अन्ततः १० वर्षको प्रयासपछि सरकारले हार मान्यो । महिलाले त्या ठाउँ छाड्दै नछाड्ने र त्यहीँ बस्ने अडान लिएपछि सरकारले महिलाको घर नहटाइ राजमार्ग निर्माण गर्ने विकल्प रोज्यो ।
सरकारले घरको चारैतिर राजमार्गको पुल निर्माण गर्यो र घरलाई त्यहीँ रहन दियो । अहिले महिला गाडीहरुको बीचमा आफ्नो जीवन बिताइरहेकी छिन् । महिलाले राजमार्ग बन्नुभन्दा अगाडि १० वर्षसम्म घर बेच्न अस्वीकार गरिरहिन् । सरकारले उनलाई दिन चाहेको मुआब्जा लिन पनि अस्वीकार गरिरहिन् । उनको यो १ तले घर ४० वर्गमिटरको छ । ग्वांडोंग टिभी स्टेशनका अनुसार यो घर ४ लेन ट्राफिक लिंकको बीचमा एक खाल्डोमा छ ।
← अहिलेसम्म सबै भविश्यवाणी मिलाउँदै आएका बुल्गेरियाका वेंगा बाबाको २०२१ मा यस्तो हुने गरे अर्को डरलाग्दो भविष्यवाणी
जहाँ पैसा जोखेर किनबेच गरिन्छ … →